Baabiyloon - Wikipedia
muuqaalka hadhaaga burburkii magaalada Baabiyloon. Qeyb yar Baabiyloon burbursan oo ku beegan deegaan Saddam Xusseen tegi jiray wakhtiga gu'ga.
Maabka boqortooyadii Baabiyloon wakhtigii uu boqor Hammurabi gacanta ku hayay.
1894 C.H (Ciise Hortii) ilaa 539 C.H
L/Y (Lama Yaqaano)
L/O (Lama Oga)
Baabiyloon (ingiriis: babylon; carabi: بابل; luuqada Akadhiga: Bābil; Luuqada Giriiga: Βαβυλών; luuqada Sumerianka: KÁ.DINGIR.RAKI;; Luuqada Yuhuuda: בָּבֶל ) waxay ahayd magaalo-ismaamusha ooy lahaayeen dadka Akadhiyaka taasi oo la dhisay sanadkii 1894tii C.H. (Ciise Hortii), wakhti yar ka dibna noqotay magaalo-madaxda boqortooyadii Baabiylooniya. Caasimada Baabiyloon waxaa dhisay qabiilka Amorite la odhan jirey ee Akaadhiyaanka ka tirsanaa kuwaas oo deegaan ku ahaa dhulkii loo yaqaanay Mesobotaamiya, taasi oo hadhaagii buruburkeeda laga helo maanta deegaanka Hillal ee ka tirsan wadanka Ciraaq, taasi oo 85 kilomitir (53 mile) u jirta koonfurta caasimada Baqdaad.
Maanta hadhaaga burburka caasimada Baabiyloon waa jaajuur jajabay iyo raad ku hadhay deegaanada carada nafaqada leh ee u dhexaysay labada webi ee Tigris iyo Furaat (Euphrates) ee deegaanka Mesobotaamiya. Magaaladan waxaa laga dhisey dhinacyada webiga Furaat. Inta la ogyahay taariikhda Baabiyloon waxay markii ugu horeeysay bilaabantey qarnigii 2aad C.H. (wakhti hada lagu qiyaaso 2,200 oo sano ka hor). Magaaladan oo markii ay yarayd isku bedeshay maamul-magaalo ayaa waxay la kacday soo bixitaankii boqortooyadii dadka Amorite, taariikhdu markey ahayd 1894 C.H. isla markaana waxay suuqa kala baxday magaaladii wakhtigaas caasimada ahayd ee Akkadiyaanku maamuli jireen "Eridu".
Marka laga reebo in Baabiyloon ka mid tahay ilbaxnimoooyinkii ugu horeeyay ee dadka, magaaladan waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah beeraha laalaada kuwaas oo ka mid ahaa todobada layaab ee dunida.
2 Taariikhda Baabiyloon
2.1 Baabiyloontii Hore
2.2 Qabsashadii Assiyriyaanka
2.3 Qabsashadii iyo Maamulkii Beershiyaanka
2.4 Wakhtiyadii Muslimiinta
3 Xadaaradii Baabiyloon
4 Faalada Baabiyloon
5 Sheegida Masiixiga
6 Dib-U-Dhiska Baabiylon
7 Jadwalka Taariikhda
8 Qoraalo La Mid Ah
Magaca Giriiga ah ee Baabiyloon (Βαβυλών) waxa laga soo xigtay magac Akkadiyaanka ah ee Babili. Ka dib, qiyaastii 10 qarni C.H. ayaa magacii Baabili ahaa loo bedelay Baabiyloon taasi oo macnaheedu tahay "Albaabka Alle" (Gate of God). 
Dhinaca kale, marka la fiiriyo luuqada Yuhuuda magaca magaalada Baabiyloon oo u qorma: בבל|בָּבֶל isla markaana loogu dhawaaqo (Babel) ama (Bāwēl), ayaa micnaheedu noqonaysaa "jaha-wareer"; waa sida ku xusan kitaabka Yuhuuda ee Jenesiska koowaad (Genesis One) maqradiisa (11:9) taasi oo laga keenay ereyga: בלבל oo u qorma bilbél, micnaheeduna yahay "lagu jaho-wareero".
Sharaxaad iyo fahan ku saabsan jiritaanka Baabiyloon waxaa laga helay boqortooyadii ka dambeeysay ee Akkadka, kuwaas oo talin jirey wakhti lagu qiyaaso qarnigii 23aad C.H. (Ciise Hortii). Midani waxay sheegaysaa in boqor la odhan jirey Saargoon uu dhisay magaalada Baabiyloon, in kastoo sharaxaad kale sheegayso in boqor Saargoon uu dib u habayn iyo balaadhin ku sameeyay maagada Baabiyloon oo horay u sii jirtey. Laakiin waxaa si fiican loo ogyahay isla markaana la isku raacay in boqor Saargoonkii labaad (Sargon II) ee boqortooyadii Assiyriyaanka uu shaqo badan ka qabtay magaalada, asagoo gaadhsiiyay heer aad u sareeysa, kana dhigay mid maamusha deegaanada u dhow ee Mesobotaamiya.
Si kastaba ha ahaatee, markay taariikhdu ku dhowayd qarnigii 19aad C.H, inta u badan deegaanada Mesobotaamiya waxaa qabsaday qabiil reer guuraa ahaa oo loo yaqaanay Amorite, kuwaas oo ka yimid waqooyiga deegaanada Lefanti (Levant) ee qabiil-weynaha Akkadiyanka maamuli jirey boqortooyadii Assiyriya la wareegeen maamulka magaalada Baabiyloon. Lefantigu waxay ahaayeen dad reer-guuraa ah, kuwaas oo dhaqda xoolaha isla markaana aqoon fiican u lahayn wax-beerashada taasi ooy ku dhaqmi jireen dadka ku dhaqnaa Baabiyloon. Taasi waxay keentay in dagaalo dhowr ahi dhex maraan dadkii Baabiyloon iyo kuwa ku soo duulay ee Lefantiga taasi oo ugu dambeyntii Lefantigu ku guulaysteen maamul buuxa oo Baabiyloon leedahay. Wakhti yar ka dib qabiiladani waxay ku guulaysteen ineey ku fidaan koonfurta Mesobotaamiya ayagoo qabsaday ismaamul-magaalo badan ooy ka mid ahaayeen "Isin", "Larsa" iyo deegaano u dhow.
Maab muujinaya deeganada hoos-imanayay Baabiyloon wakhtigii boqor Hammurabi ee intii u dhexaysay 1792 CH iyo 1750 CH
Boqortooyadii ugu horeeysay ee laga dhiso magaalada Baabiyloon waxaa sameeyay qabiilka Amoriteka taas oo lagu magacaabi jirey "Sumu-abum" sanadkii 1894 C.H. Si ka duwan bulshooyinkii Sumeriyaanka iyo Akkadiyaanka oo ka baxsanaa deegaanada Mesobotaamiya, dadka Amoriteku waxay ahaayeen dad reer guuraa ah kuwaasi oo ka yimid deegaanada galbeedka.
Goortii uu boqor Hamurabi qabsaday maamulka magaalada iyo boqortooyda Baabiyloon (1792–1750 C.H) wuxuu ku fiday deegaanada ku hareeraysnaa iyo waliba maamulo yaryar oo u dhowaa magaaladan. Laakiin dhimashadii boqor Hamuraabi waxay keentay in deegaano iyo beelo badani ka hoos baxaan maamulka boqortooyadaasi inkastoo dadka Amoriteku wali ka talinayeen magaaladaasi.
Si kastaba ha ahaatee, taariikhyahanadu waxay isla garteen in Baabiyloon ay tahay magaaladii ugu wayneyd dunida wakhtiyadii u dhexaysay 1770 ilaa 1670 C.H, iyo mar labaad wakhtiyadii u dhaxaysay qiyaastii 612 iyo 320 C.H. Intaas waxaa dheer, magaalada Baabiyloon waa magaaladii ugu horeeysay ee yeelata tiro shacab ah oo ka badan 20,000 oo qof, taasi oo ku fadhiday dhul baaxadiisu tahay 890 ilaa 900 hectare (2,200 acre).
boqor Sennacheribka Assiyriya wakhtigii uu dagaalka kula jirey Baabiyloon.
Wakhtiyadii fiditaanka boqortooyadii Assiyriya (911–608 C.H) magaalada Baabiyloon iyo nawaaxigeedu waxay ku hoos jireen maamulka dadka Assiyriyaanka ah. Wakhtigii maamulka Assiyriya uu gacanta ku hayay boqor Sennacherib, magaalada Baabiyloon wuxuu ku wareejiyay qabiilka "Jaldiin" (Chaldean) oo goortaas lahaa maamul suldaanimo oo hogaamiye u ahaa Merodach-Baladan. Qabiilka Jaldiin waxay si degdeg ah ula wareegeen goobaha ugu muhiimsanaa ee magaalada Baabiyloon ayagoo xasuuq ba'an u geeystay madaxdii magaalada.
Qabsashadii iyo Maamulkii BeershiyaankaEdit
Sanadkii 539 C.H ka dib dagaalkii caanka ahaa ee Oobis (Battle of Opis), ismaamulkii boqortooyada Baabiyloon waxay gacanta u gashey boqor Sayrus (Cryus the great) ee boqortooyadii Beershiya. Dagaalka uu soo qaaday boqor Sayrus ee boqortooyada Beershiya wuxuu ahaa mid kedis iyo lama filaan ku noqday dadka Amoriteka ee maamuli jirey Baabiyloon. Maadaama uu deyr (wall) adag ku wareegsanaa magaalada, aad ayay ugu adkaatay askartii Beershiya inay si fudud u qabsadaan Baabiyloon. Si kastaba ha ahaatee, maalmo badan iyo iskudayo badan ka dib ciidamadii Beershiya wey galeen magaalada. Inkastoo aanay cadayn sida ay ku qabsadeen, waxaa la sheegay in ay jebiyeen mid ka mid ah albaabada waawayn ee ka samaysnaa birta xadiidka; ama ay soo raaceen biyaha webiga Furaat.
Si kastaba ha ahaatee, goortii boqor Sayrus qabsadey magaalada Baabiyloon, wuxuu si dhakhso ah u kala soocay bulshooyinkii deganaa magaalada asagoo qolo kasta ku amrey ineey dib ugu noqdaan meeshii ay ka yimaadeen marka hore ama deegaanada ay u dhasheen. Dadkaas magaalada Baabiyloon laga masaafuriyey waxaa ka mid ahaa Yuhuuda oo ayagu u guurey magaalada Jerusalem (beytul Qudus).
Wakhtiyadii maamulka boqor Sayrus iyo boqorkii ku xigay ee Beershiya boqor Daariyaas (Darius the Great) magaalada Baabiyloon waxay noqotay caasimada 9aad ee boqortooyada Beershiya. Intaas waxaa dheer, boqor Daariyaas wuxuu u magacaabay magaalada Baabiyloon in ey noqoto xarunta ugu muhiimsan ee waxbarshada iyo horumarinta sayniska iyo cilmiga iyo aqoonta. Qeybaha waxbarasho ee si fiican loogu horumariyay magaalada Baabiyloon waxaa ka mid ah xisaabta iyo Cilmi Falaga kuwaasi oo la gaadhsiiyay heer aad u sareeya. Intaas waxaa dheer, aqoonyahanada magaalada Baabiyloon waxay sameeyeen maabkii ugu saxsanaa ee caasimadu yeelato inteey jirtey. Sidoo kale waxay dhiseen biyo mareeno aad u casri ah kuwaas oo ka imanayay webiga Furaat ee caasimada Baabiyloon dhinacyada ka degan tahay.
Iskudeyo afgambi ooy dhowr jeer sameeyeen qabiilada Amoriteka iyo xulafadooda ayaa ku fashilmey ineey maamulka magaalada Baabiyloon kala wareegaan boqortooyadii Beershiya. Kuwaas waxaa ugu darnaa iskudey dhacay sanadkii 522 C.H, iyo sanadkii 521 C.H ayaa aad ugu dhowaaday ineey dagaalyahanada Amoriteka iyo xulafadoodu qabsadaan magaalada Baabiyloon. Laakiin sanadkii 482 C.H, iskudey afgambi ay mucaaradku sameeyeen wuxuu ahaa mid aad u liita oo xataa dad badani maqlin in mudo ah. Si kastaba ha ahaatee, maamulka boqortooyada Beershiya waxay gacanta ku haysay magaalada Baabiyloon iyo deegaanada ku hareersan wakhti dhan labo qarni ilaa ciidamadii Alegsaander (Alexander the Great) ay yimaadeen sanadkii 331 C.H
Maabka gobolada Dawladda Islaamku ka talineeysay.
Markey taariikhdu ahayd qarnigii 7aad C.D ayaa waxaa deegaanada Mesobotaamiya qabsaday boqortooyadii Muslimiinta ee wakhtigaasi ku fidey dhamaan bariga dhexe. Maamulkii Dawladda Islaamku waxay magaalada Baabiyloon iyo deegaanadii boqortooyada Baabiylooniya ka dhigeen gobol ka mid ah boqortooyada. Wakhti yar gudaheed dadkii deegaanada Mesobotaamiya (Baabiylooniya, Akkadiyaan, Sumeriyaan, Assiyriya iyo kuwo kale) deganaa waxaa Dawladda Islaamku ku soo rogtay ineey qaataan diinta Islaamka ayadoo kaniisadihii masiixiga loo bedelay masaajido iyo goobo wax lagu barto.
Boqortooyadii Islaamka markey maamulayeen Umawiyiinta ayaa inta u badan deegaanada mesobotaamiya gacanta lagu dhigay, isla markaana mid ka dhigay dhamaan ismaamuladii iyo boqortooyooyinkii wakhtigaas ka jirey meelahaasi.
Beeraha magaalada Baabiyloon, sawirgacmeed la sameeyay qarniga 20aad.
Boqortooyada Baabiyloon waxay ka mid tahay meelihii ugu horeeyay ee ilbaxnimoda bani aadamku ka bilaabantey, ayadoo safka hore kaga jirta ilbaxnimada deegaanada Mesobotaamiya oo ah xudunta ilbaxnimada aadamaha. Magaalada Baabiyloon waa midii ugu horeeysay ee yeelata bulsho degan oo aad u badan, waxay ahayd hooyga aqoonta, cilmiga iyo waxbarashada ee dadkii wakhtigaas noolaa.
Gidaarka weyn ee magaalada Baabiyloon.
Beeraha Laalaada ee Baabiyloon iyo gidaarka magaalada Baabiyloon (maanta ku beegan magaalada Al-Hillal ee dalka Ciraaq) waxay ka mid ahaayeen Todobada Layaab ee dunida. Beerahan waxaa dhisay boqor Nebujadnesarkii 2aad (Nebuchadnezzar II) ee boqortooyadii Baabiylooniya markii taariikhdu ahayd qiyaastii sanadkii 600 C.H, taasi oo sababtu ahayd in uu ku raali-geliyo xaaskiisa Amaytis. Beeraha laalaada waxay burubureen qarnigii 1aad C.D markii dhul gariir adag ku habsaday deegaanada magaalada Baabiyloon ee Mesobotaamiya.
Beeraha Laalaada ee magaalada Baabiyloon wakhtigii maamulka Assiyriyanka.
Nin socdaa ah oo la odhan jirey Simbilikiyas (Simplicius), oo qarnigii 4aad C.H. wax ka qoray taariikhda bariga dhexe ayaa mar uu Baabiyloon tagay sheegay in uu ku arkey in dadka magaaladaasi ay lahaayeen aqoon aad u sareeysa ayagoo ku fiicnaa isla markaana horumariyay xisaabta, daawooyinka, miisaanka iyo ganacsiga. Ninkani wuxuu aad ula yaabay sida ay aqoonyahanada reer Baabiyloon u sharaxeen Cilmi Fallag ayagoo xidigisyahanada Baabiyloon sharaxeen meereyaasha ku sugan cirka ee Bahda Qoraxdu Midaysay. Sidoo kale, sanadkii 490 C.H nin kale oo socdaale Giriig ahaa oo la odhan jirey Foroneyas (Phoroneus), markuu tagay magaalada Baabiyloon wuxuu ku arkey dhismoyaal aad u cajab badan iyo xadaarad aad u sareeysa marka la barbardhigo dunida wakhtigaas ay ku noolaayeen. Nin qoraa ahaa Istiifanus (Stephanus) ee reer Baysantiyaam (Byzantium), wuxuu qoray in magaalada Baabiyloon uu tagay sanadkii 1002 C.H.; taasi oo ah wakhti ka horeeysa taariikhda uu sheegay Helanikus (Hellanicus) reer Mytilene, isla markaana ay ka horeeysay wakhtigii la go'doomiyay magaalada Troy (1229 CH), taasi oo ka dhigaysa wakhtiga Baabiyloon la helay 2231 C.H.
Taariikhda Ciraaqdii hore
Taariikhda Ciraaqdii Dhexe
Wakhtiyadii Maamulka Islaamka
Ciraaqda Qarniga 20aad
Maamul Ku Meelgaadhka ee Ciraaq
Jamhuuriyada Ciraaq (1958–68)
Qabsashada Ciraaq (2003–11)
Kitaabka Wuxuu Sii Sheegay Baabbiʼintii Baabuloon
↑ 1.0 1.1 1.2 The Cambridge Ancient History: Prologomena & Prehistory: Vol. 1, Part 1. Accessed 15 Dec 2010.]
↑ "magaca af-Carabiga carabi: بابل"
↑ "luuqada Akadhiga: Bābil"
↑ "webi ee Tigris iyo Furaat"
↑ "bilaabantey qarnigii 2aad C.H. (wakhti hada lagu qiyaaso 2000 oo sano ka hor)."
↑ Simpl. ad Arist De Caelo. ii. 503A)
↑ "Baabiyloon ay tahay magaaladii ugu wayneyd dunida wakhtiyadii u dhexaysay 1770 ilaa 1670 C.H"
↑ "tiro shacab ah oo ka badan 20,000 oo qof"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Baabiyloon&oldid=220191"
Last edited on 18 Oktoobar 2021, at 04:19
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Oktoobar 2021, marka ee eheed 04:19.